(Cobalt မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အတည်ငြိမ်ဆုံး ကိုဘော့ (ဒြပ်စင်)၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
ကိုဘော့ (အင်္ဂလိပ်: Cobalt) သည်တောက်ပပြီး မီးခိုးရောင်ရှိ မာကြောကျွတ်ဆတ်သော ဒြပ်စင် တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ ဒြပ်စင်အလှည့်ကျဇယား ( periodic table ) ၏ အုပ်စု VIII တွင် တည်ရှိသည်။ ကိုဘော့၏ ရုပ်ဂုဏ်သတ္တိများမှာ သံ၊ နီကယ် တို့နှင့် ဆင်တူပြီး သံလိုက်စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေး နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဓာတုဆိုင်ရာ ဓာတ်ပြုမှုလွယ်ကူပြီး ဒြပ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ လေထဲ၌ တည်မြဲနိုင်ပြီး ရေတိုက်စားခြင်းကိုလဲ ခံနိုင်စွမ်းရှိသော ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။ အားပျော့အက်ဆစ် (dilute acid ) ဖြင့် ဖျော်သောအခါ သံကဲ့သို့ အလွယ်တကူ ပျော်ဝင်ခြင်း မရှိဘဲ နှေးကွေးစွာ ပျော်ဝင်ပါသည်။
ကိုဘော့(Cobalt)အများစုသည် ကမ္ဘာ့မြေကြီး၏ အလယ်ဗဟို၌ တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ မျက်နှာပြင်နှင့် ရေထုထဲ၌ ကိုဘော့ပါဝင်မှုနှုန်းသည် အလွန်နည်းပါးသည်။ ရေထဲတွင်ပါဝင်သော ကိုဘော့သည် ပျော်ဝင်သတ္တိ အလွန်အားနည်းသော CoS (Cobalt sulfine) အဖြစ် အနည်ကျပါသည်။ မြေဆီလွှာထဲတွင် ကိုဘော့ပါဝင်မှုသည် ပျမ်းမျှအားဖြင့် 8ppm ခန့်ဖြစ်သော်လည်း ကိုဘော့ပါဝင်မှု နည်းသော မြေဆီလွှာများမှာ အနည်းဆုံး 0.1ppm ခန့်သာ ပါဝင်ပြီး ကိုဘော့ ပါဝင်မှုများသော မြေဆီလွှာများမှာ အများဆုံး 70ppm အထိ ပါဝင်နိုင်သည်။ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာ ရေအောက်ပိုင်းတွင် စိမ်းပြာရေညှိ (cyanobacteria) နှင့် နိုက်ဒြိုစားသုံးသော အခြားသက်ရှိများ (nitrogen fixing organisms) အတွက် ကိုဘော့သည် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါသည်။ ကိုဘော့ကို သတ္တုသီးသန့် အနေဖြင့် မတွေ့နိုင်ပဲ သတ္တုရိုင်း (ores ) အနေဖြင့်သာ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ကိုဘော့ကို သီးသန့် တူးဖော်၍ မရနိုင်ပါ။ နီကယ် (nickel)၊ ကော့ပါး (copper) စသည့်သတ္တုများနှင့် ရောနှောပြီး by-product အဖြစ်သာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဓိကကျသော ကိုဘော့ သတ္တုရိုင်းများမှာ cobaltite (CoAsS)၊ erythrite(Co3(AsO4)2·8H2O) ခေါ်အနီရောင်ရှိသော ကိုဘော့၊ glucodot ((Co,Fe)AsS) နှင့် skutterudite (Co,Ni,Fe)As3 တို့ဖြစ်သည်။ ကိုဘော့ အများဆုံးထွက်ရှိသော နိုင်ငံများမှာ ကွန်ဂို၊ တရုတ်၊ ဇမ်ဘီးယား၊ ရုရှား နှင့် ဩစတြေးလျ တို့ ဖြစ်ကြပြီး ဖင်လန် ၊ အဇာဘိုင်ဂျန် နှင့် ကာဇက်စတန် စသည့် နိုင်ငံများတွင်လည်း ထွက်ရှိသည်။ ကမ္ဘာ့ ကိုဘော့ထွက်ရှိနှုန်းမှာ တစ်နှစ်လျှင် တန် ၁၇၀၀၀ ဖြစ်သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိုဘော့ဓာတ်များ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိသောကြောင့် အသက်ရှုခြင်း၊ ရေသောက်ခြင်း၊ အစာစားခြင်း တို့မှတဆင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းသို့ ကိုဘော့ဓာတ်များ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကိုဘော့ပါဝင်သော မြေ သို့မဟုတ် ရေ နှင့် အမြဲတမ်းထိတွေ့နေလျှင်လည်း အရေပြားမှတဆင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ကိုဘော့ဓာတ်များ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ကိုဘော့သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမြဲတမ်း သီးသန့် လွတ်လပ်စွာ တည်ရှိမနေနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း မြေဆီလွှာ ထဲတွင် များစွာ နစ်မြုပ်နေသောအခါတွင် အပင်နှင့် သတ္တဝါများမှ စုပ်ယူသုံးစွဲမှု မြင့်မားလာပြီး ၎င်းတို့ထဲတွင် အစုအဝေးအဖြစ် တည်ရှိနေနိုင်သည်။ ကိုဘော့တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင် B12 ပါရှိသောကြောင့် လူသားများအတွက် အရေးပါသော ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုဘော့သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း အနီရောင်ဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သောကြောင့် သွေးအားနည်းရောဂါ ကုသရာတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ နေ့စဉ် ကိုဘော့ဓာတ် ရောက်ရှိမှုသည် အများဆုံး ၁ မီလီဂရမ်(1 mg) ခန့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုဘော့ဓာတ်ထဲတွင် ပါဝင်သော ဗီတာမင် B12 တစ်မျိုးသာ ခန္ဓာကိုယ်က စုပ်ယူသုံးဆွဲပြီး တခြားဓာတ်များကို စုပ်ယူထားခြင်း မရှိပါ။ ကိုဘော့ဓာတ် လွန်ကဲခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်ကို အန္တရာယ်ဖြစ် စေနိုင်သည်။ ကိုဘော့ပါဝင်မှု များသောလေကို ရှူရှိုက်မိသောအခါ ပန်းနာရောဂါ၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ တို့ကဲ့သို့ အဆုတ်နှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများဖြစ် ပွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းရောဂါများမှာ ကိုဘော့နှင့် အမြဲ ထိတွေ့ လုပ်ကိုင်နေရသော လူများတွင် အများဆုံး ဖြစ်ပွားပါသည်။ အညစ်အေကြေးများသော မြေဆီလွှာတွင် ပေါက် ရောက်နေသော အပင်များတွင် အလွန်သေးငယ်သော ကိုဘော့အမှုန် အမြောက်အမြား ပါရှိသည်။ အထူးသဖြင့် လူတို့စားသုံးသော အပင်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်သော အသီးနှင့် အစေ့များတွင် ကိုဘော့ဓာတ် အများဆုံး ပါရှိသည်။ ကိုဘော့တူးဖော်သော သတ္တုတွင်း အနီးရှိမြေဆီလွှာနှင့် ကိုဘော့ ဓာတ်များစွာပျော် ဝင်နေသော မြေဆီလွှာများတွင် သီးပင်စားပင်များ စိုက်ပျိုးစားသောက်ခြင်းဖြင့် ကိုဘော့ဓာတ် လွန်ကဲ၍ ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ကိုဘော့ဓာတ် လွန်ကဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော ရောဂါများမှာ -
ရေဒီယို သတ္တိကြွနေသော ကိုဘော့အိုင်ဆိုတုပ် မှ ထုတ်လွှတ်သော ဓာတ်ရောင်ခြည် (radiation) ကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေး ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကိုဘော့ အိုင်ဆိုတုပ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်သော ရောဂါများမှာ ကလေးမရရှိနိုင်ခြင်း (sterility)၊ ဆံပင်မပေါက်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း (vomiting)၊ သွေးထွက်လွန်ခြင်း (bleeding)၊ ဝမ်းရောဂါ (diarrhea)၊ အတိတ်မေ့ရောဂါ (coma) စသည့်ရောဂါများ အပြင် အသက် ဆုံးရှုံးသည်အထိ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းရေဒီယို သတ္တိကြွနေသော ကိုဘော့မှထွက်သော ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို ကင်ဆာရောဂါ ကုသသော နေရာများတွင် ကင်ဆာအကျိတ်များကို ဖျက်ဆီးရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ထိုကဲသို့ ကုသခံရသော ကင်ဆာ ဝေဒနာရှင်များသည်လည်း ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း၊ ဝမ်းရောဂါဖြစ်ခြင်း နှင့် အော့အန်ခြင်း ကဲ့သို့ ရောဂါများ ခံစားရသည်။
ကိုဘော့၏ ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးသက်ရောက်မှု (Environmental effects of cobalt) ကိုဘော့သည် မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ ကျောက်၊ အပင်များ နှင့် သတ္တဝါများထဲတွင် သဘာဝ အလျောက် တွေ့ရှိနိုင်သော ဒြပ်စင်တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ လေတိုက်ခတ်သောအခါ ကိုဘော့ အမှုန်လေးများသည် လေနှင့်အတူ လွင့်မျောနိုင်ပြီး တစ်နေရာရာတွင် စုပုံနေနိုင်သည်။ မိုးရွာသောအခါ ကိုဘော့ပါသော မြေဆီလွှာ သို့မဟုတ် ကျောက်သားများကို မိုးရေတိုက်စားပြီး ကိုဘော့များသည် မိုးရေနှင့် အတူ မြစ်၊ ချောင်း၊ ပင်လယ် များထဲသို့ သယ်ဆောင်သွား နိုင်သည်။ ကျောက်မီးသွေးကဲ့သို့ လောင်စာများ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ကိုဘော့ပါသော သတ္တုရိုင်းများ တူးဖော်ခြင်း နှင့် ကိုဘော့ပါသော ဓာတုပစ္စည်းများကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် သို့ ကိုဘော့များ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ရေဒီယို သတ္တိကြွနေသော ကိုဘော့ကို ပတ်ဝန်းကျင်၌ သဘာဝအတိုင်း မတွေ့ရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် သက်တမ်းဝက်( half-life) တိုပြီး နျူးကလီးယားစွမ်းအင် ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ကိုဘော့ဓာတ် အလွန်နည်းပါးသော မြေဆီလွှာမျိုးတွင် ပေါက်ရောက်သော အပင်များမှာ ကိုဘော့ဓာတ် ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါးပြီး ၎င်းမြေမျိုးတွင် ကျက်စားနေထိုင်သော သတ္တဝါများ အတွက်လည်းပဲ လိုအပ်သော ကိုဘော့ဓာတ်ချို့တဲ့ ခြင်းများ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။ ကိုဘော့ဓာတ် လွန်ကဲလျှင်လည်း ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေသော ဟင်းသီး ဟင်းရွက် နှင့် အသားငါးများတွင် ကိုဘော့ဓာတ် ပါဝင်မှု လွန်ကဲ ခြင်းမရှိပါ။
↑ Greenwood၊ Norman N.; Earnshaw၊ Alan (1997)။ Chemistry of the Elements (2nd ed.)။ Butterworth-Heinemann။ pp. 1117–1119။ ISBN 0-08-037941-9။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကိုဘော့_(ဒြပ်စင်)&oldid=701968" မှ ရယူရန်